Ireo fivarotana 5 malaza indrindra any New York | Fitsangatsanganana tanteraka
Ireo fivarotana 5 malaza indrindra any New York
Isabel | | New York
Ho an'ny mpandeha maro dia trano fivarotana i New York. Raha mikasa ny handeha hitsangatsangana any New York ianao dia mety manontany tena raha tokony hitondra valizy poakaty fanampiny ho an'ny fividiananao any.
Ny valiny dia hiankina amin'ny teti-bolanao sy ny fitiavanao miantsena fa mampitandrina anao aho fa azo inoana fa hiverina an-trano ianao miaraka amina fanomezana vitsivitsy, satria amin'ny Big Apple dia azo atao ny mahita ny karazan-vokatra rehetra amin'ny vidiny rehetra. Inona koa, Na dia tsy goavana aza ny tsy fitovian'ny vidiny amin'i Eropa dia mety misy dikany izany, izay mety hampirisika anao handany. Raha fintinina dia halaim-panahy ianao!
Raha misy zavatra tiako momba an'i New York raha resaka fiantsenana dia ireo fivarotana maro karazana misy ao. Rehefa mandeha mamaky ny arabeny ianao dia hahita fivarotana mahasarika ny sainao hatrany ary manasa anao hiditra hijerena ny vokariny. Manomboka amin'ny boutiques misy marika sy toeram-pivarotana lehibe hatramin'ny tsena antenitra sy fivarotana tanora mpamorona. Misy zavatra ho an'ny rehetra! Na izany aza, amin'ny lahatsoratra manaraka dia hifantohako magazay 5 malaza indrindra any New York izay tsy tokony halahelo ny mpandeha. Ho tianao izany!
1 Macy ny
1.1 Inona avy ireo fizarana ao amin'ny Macy's?
1.2 Rahoviana no hitsidika an'i Macy's?
1.3 Data mahaliana
2 Tiffany ny
2.1 Data mahaliana
3 Saks Fahadimy Avenue
3.1 Lamaody fampakaram-bady ao amin'ny Avenue Saks Fifth
3.2 Mialà sasatra ao amin'ny Fika Coffee Bar
3.3 Rahoviana no hitsidika ny Avenue Saks Fifth?
3.4 Data mahaliana
4 Bloomingdale ny
4.1 Data mahaliana
5.1 Data mahaliana
Mety toeram-pivarotana lehibe malaza indrindra amin'ny magazay rehetra any Etazonia ary fitsidihana tena ilaina amin'ny làlan'ny fiantsenana mamaky an'i New York. Goavana tokoa ity magazay ity ka mila sakana iray ao amin'ny Herald Square. Ao amin'ny rihana folo mahery, dia ho hitanao ny ankamaroan'ny marika ary saika amin'ny toerana iray ny zava-drehetra, ka hatramin'ny mpanjifa antsinjarany aza.
Satria trano roa no anaovana azy dia sarotra indraindray ny mahita izay tadiavinao fa raha very ianao dia aza misalasala manatona ny mpiasa ao aminy. Raha ny marina dia zava-dehibe tokoa io magazay io any New York fa tamin'ny 1978 ny firafiny dia voatanisa ho Tsangambato manan-tantara. Miverina any amin'ny fiantsenana indray, raha mitady marika fantatra ianao, fifanarahana tsara ary rivo-piainana milamina dia tsy maintsy mitsidika an'i Macy ianao.
Inona avy ireo fizarana ao amin'ny Macy's?
Ny gorodona sy ny mezzanine dia natokana ho an'ny menaka manitra sy firavaka (Chanel, Clinique, Dior, Gucci, Lancôme, Louis Vuitton, MAC, NARS, Shiseido, Tom Ford, Ralph Lauren ary Tory Burch, ankoatry ny maro hafa.
Ao amin'ny rihana faharoa an'ny Macy ny fivarotana kiraro (Calvin Klein, Adidas, Gucci, Louis Vuitton, Nike, Michael Kors, Sam Edelman, Ralph Lauren, Sketchers, Converse, Vans ...) raha amin'ny rihana fahatelo kosa dia milefitra ny kilaometatra volamena miaraka amin'ireo butikety lafo vidy tsara indrindra (Armani Exchange, French Connection, Calvin Klein, INC, Polo Ralph Lauren na Michael Kors). Amin'ny rihana fahefatra sy fahadimy dia azonao atao ny mandany ny tolakandro satria any no misy ny lamaody vehivavy rehetra an'ny Macy afa-tsy ny akanjo anatiny izay misy amin'ny rihana fahenina eo akaikin'ny faritra natokana ho an'ny trano.
Ny lamaody ho an'ny ankizy dia miorina amin'ny rihana fahafito raha ny fanaka sy ny haingo kosa dia eo amin'ny fahasivy. Ho an'ny mpizahatany, ity zavamaniry ity dia tena mahaliana satria natao ho an'ny karazana valizy sy kitapo fitsangatsanganana. Izany hoe, eto dia afaka mividy izay rehetra ilainao ianao mba hividianana ny entana rehetra vidinao any New York aorian'ny fialan-tsasatrao.
Ary inona no hitanao amin'ny rihana fahavalo an'ny Macy's? Zavamaniry somary manokana ity satria ny entana amidy eto dia miankina amin'ny fotoan'ny taona fitsidihanao ny tanàna. Ohatra, amin'ny ririnina dia nametraka ny akanjo rehetra ho an'ny lanezy izy ireo ary nanangana Santaland ho an'ny ankizy kely, tanàna ririnina ahafahan'ny ankizy mihaona amin'i Santa Claus amin'ny famandrihana ao amin'ny tranonkala ofisialy. Etsy ankilany, amin'ny fahavaratra dia afaka mividy akanjo milomano ianao. Etsy ankilany, ny rihana fahavalo dia ny faritra maharitra natokana ho an'ny akanjo mariazy ao Macy's.
Rahoviana no hitsidika an'i Macy's?
Manokana, ny fotoana tiako indrindra amin'ny taona mankany Macy's dia mandritra ny Noely Eny, mahatalanjona ireo varavarankely Krismasy misy azy. Isan-taona ireo departemanta fivarotana ireo dia mihoatra ny mahagaga ny mpanjifa ary raha mitsidika ny New York ianao mianakavy dia ho tian'ny ankizy ny atmosfera fety any Santaland. Ho traikefa tsy hohadinonin'izy ireo izany ary azonao atao ny manararaotra mividy fanomezana Krismasy ho azy ireo ao amin'ny Macy's. Ny haingo fialantsasatr'i Macy dia azo zahana manomboka amin'ny herinandro Thanksgiving ka hatramin'ny 26 Desambra.
Raha tsy mifanaraka amin'ny Krismasy ny dianao any New York, Fotoana iray hafa handehanana miantsena amin'ity mall ity amin'ny faran'ny volana martsa izay atao ny Macy's Flower Show. Seho voninkazo izay efa natao nanomboka tamin'ny 1946. Isan-taona dia tsy mitovy ny lohahevitra ary voninkazo manodidina ny iray tapitrisa no ampiasaina handravahana ny trano mandritra ny tapa-bolana. Tena tsara tarehy io.
Aiza ny Macy's?: 151 W 34th St, New York, NY 10001
Ora: Alatsinainy ka hatramin'ny alakamisy manomboka amin'ny 11 maraina ka hatramin'ny 8 hariva. Zoma sy sabotsy manomboka amin'ny 11 maraina ka hatramin'ny 9 hariva. Alahady manomboka amin'ny 11 maraina ka hatramin'ny 8 hariva.
New York City dia filma napetraka. Famokarana manan-danja izay namela ny lazany tamin'ny kolontsaina malaza dia voatifitra tao. Iray amin'ireto sarimihetsika ireto ny "Breakfast at Diamonds" (1961) ilay sary namboarina tamin'ny tantara nosoratan'i Truman Capote izay nilalao an'i Audrey Hepburn tamin'ny efijery lehibe.
Raha ity sary mihetsika ity dia manana sehatra malaza izay tadidintsika rehetra, dia i Holly mijoro eo anoloan'ny varavarankelin'i Tiffany eo amin'ny Fifth Avenue izay manana croissant ho an'ny sakafo maraina amin'ny akanjo Givenchy mainty. Amin'izao fotoana izao, olona maro no manararaotra ny diany mankany New York hitsidika an'io firavaka malaza io sy haka tahaka ilay mpilalao sarimihetsika angano izay naka ny sary mahazatra miaraka amina kafe sy muffin. Tahaka ny fomban-drazana tsy voasoratra, tsy azonao atao ny mamela ny Big Apple raha tsy misy anao.
Fa raha ankoatry ny maha-buffe film anao dia liana amin'ny firavaka ianao dia tsy tokony halahelo an'ity magazay mahafinaritra ity izay ao anatin'ny National Register of Histories Places. Ireo sombin-javatra amidin'izy ireo dia asa kanto tena izy ary raha tianao ny iray dia azonao atao foana ny mangataka azy io ho fonosina ho fanomezana.
Aiza izany?: 5th Avenue sy 57th Street
Ora: Alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva. Alahady manomboka amin'ny 12 PM ka hatramin'ny 5 PM.
Saks Fahadimy Avenue
Sary | LightRocket amin'ny alàlan'ny Getty Images
Iray amin'ireo magazay malaza indrindra any New York koa ny Saks Fifth Avenue. Any akaikin'ny Rockefeller Center sy eo akaikin'ny Katedraly St. Patrick no nananganana azy tamin'ny 1867 ary heverina ho mariky ny fanavahana sy ny hakanton'ny tanàna. Nandritra ireo gorodony folo, ny departemanta samihafa izay manana vokatra avy amin'ny marika iraisam-pirenena malaza indrindra (Valentino, Fendi, Alice + Olivia, Burberry, Prada, sns.) Dia voatonona avokoa.
Araraoty ny fitsidihana ny top of the Rock viewpoint na ao anatin'ny Katedraly St. Patrick hizaha ireo fivarotana lehibe ireo avy eo. Ho hitanao ao ny zava-drehetra ho an'ny rehetra. Ny zavamaniry lamaody ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy dia feno fitafiana sy kojakoja faran'izay tsara. Izy ireo aza dia manana serivisy fivarotana manokana hanampiana anao hisafidy ireo akanjo sy loko mifanaraka aminao indrindra mifanaraka amin'ny fombanao.
Lamaody fampakaram-bady ao amin'ny Avenue Saks Fifth
Raha mitsidika an'i New York ianao ary sendra mikasa ny fampakaram-badinao ianao na efa nasaina tamina fampakaram-bady, dia mety te-hijanona eo amin'ny sehatry ny fampakaram-bady ao amin'ity magazay ity ianao. Manana safidy mariazy sy akanjo fampakaram-bahiny avy amin'ny mpamorona tsara indrindra ary koa ny zavatra ilaina rehetra izy ireo mba hamenoana ny endrika toy ny voaly, kiraro, akanjo anatiny, firavaka ... Fantatr'i Saks Fifth Avenue ny pitsopitsony rehetra.
Mialà sasatra ao amin'ny Fika Coffee Bar
Aleo atrehana, mahasasatra ny fiantsenana. Raha aorian'ny fiantsenana iray andro dia mila miala sasatra ianao, mankanesa any amin'ny rihana fahadimy amin'ny Avenue Saks Fifth Avenue izay misy kafeteria soedoà izay ahafahanao mankafy kafe vao avy namboarina miaraka amin'ny horonan-kanelina nentim-paharazana izay hanome anao angovo ampy hanohizana miantsena. .
Rahoviana no hitsidika ny Avenue Saks Fifth?
Mandritra ny taona dia mahasoa ny fitsidihana ny Saks Fifth Avenue fa toa an'i Macy, ny Krismasy dia fotoana be mpitia indrindra handehanana any amin'ireo magazay ireo satria miezaka mafy ny mpiasa handravaka ny trano iray manontolo miaraka amin'ny tarehin-Krismasy ary toa mahavariana. Tena mahavita manaitra ny mpanjifa isan-taona tokoa izy ireo amin'ny tolo-kevitr'izy ireo mamorona ary mamporisika anao haka sary ao anaty fotodrafitrasa ho haingo Krismasy iray hafa.
Aiza izy?: 611 5th Avenue New York, NY 10022
Ora: Alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 8 hariva. Alahady manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 7 hariva.
Ajay Suresh avy any New York amin'ny alàlan'ny Wikipedia
Iray amin'ireo foibe fiantsenana manana tantara maro tany New York koa ny an'i Bloomingdale, azo antoka fa ho toy ny andian-tantara toy ny "Friends" izy io satria teo no niasa Rachel Green, iray amin'ireo mpihetsiketsika. Ny nanombohana fivarotana kely amin'ny ilany Atsinanana Atsinanana tamin'ny 1861 dia nanjary iray amin'ireo fivarotana lehibe indrindra eto Etazonia miaraka amin'ireo fivarotana manerana ny firenena na dia ny foiben'ny 59th Street sy Lexington Avenue, any amin'ny faritra atsinanana ambony, dia ny malaza indrindra rehetra.
Tsy toa an'i Saks Fifth Avenue, ny vidiny tsy dia lafo loatra any Bloomingdale's ary azonao atao koa ny mividy lamaody, firavaka, kojakoja, ranomanitra sy zavatra haingon-trano amin'ny marika tsara. Raha somary teritery kokoa ny teti-bolanao, ity dia toerana tsara handehanana miantsena any New York ary iray amin'ireo malaza indrindra.
Ny antony iray hafa mahatonga an'i Bloomingdale malaza be dia be noho ny "kitapo volontsôkôlany". Ireo tranombarotra ireo dia mpisava lalana amin'ny fanoloana harona plastika amin'ny harona taratasy mba hikarakarana ny tontolo iainana. Nanjary sary masina mihitsy aza izy ireo ary amidy ho fahatsiarovana an'i New York ao anaty kitapo, kitapo, kitapo fidiovana ... Fantatrao izay hovidiana ao amin'ny Bloomingdale's!
Aiza izy?: 1000 Third Avenue, NY
Ora: Alatsinainy ka hatramin'ny alahady, manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 8:30 alina
Sary | Karsten Moran ho an'ny The New York Times
Rehefa miditra amin'ny FAO Schwarz ianao dia hiverina amin'ny fahazazanao voalohany indrindra! Niorina tamin'ny taona 1862, izy no fivarotana kilalao lehibe indrindra any New York, izay mizara roa rihana amin'ny rihana ambanin'ny trano malaza 30 Rock ao amin'ny Rockefeller Center.
Malaza be ity fivarotana ity ka nipoitra imbetsaka tamin'ny sinema tamin'ny sarimihetsika toy ny "Home Alone 2" na "Big". Azo antoka fa mahazatra anao izany avy amin'ilay sehatra malaza nandihizan'i Tom Hanks tamina piano tactile. Raha voakaikitry ny fanahafana an'ity filaharana ity ianao, ao amin'ny magazay dia misy kopia izay ahafahanao mandihy amin'ny piano «Big» ihany koa.
Raha vantany vao miditra ianao dia hoarahin'ny mpiraki-draharaha mitafy ny fanamian'ny miaramila, izay afaka manampy anao hahita izay tadiavinao. Mandeha amin'ny lalantsara amin'ny FAO Schwarz dia afaka mankafy ireo faritra samihafa ao aminy ianao. Misy faritra natokana ho an'ny majika, iray hafa ho an'ny siansa, fizarana saribakoly ary orinasa mpamono biby, ankoatry ny maro hafa. Iray amin'ireo tiako indrindra ny fizarana vatomamy sy trinkets. Ao amin'ity magazay ity dia manana karazana vatomamy isan-karazany amin'ny endriny sy loko ary tsiro rehetra izy ireo. Fahatsiarovana tena izy io avy any New York raha te-hanao gaga olona iray amin'ny nify mamy ianao!
Aiza izany: 30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10111
Ora: Misokatra ny alarobia ka hatramin'ny asabotsy manomboka amin'ny 11 maraina ka hatramin'ny 7 hariva. Alahady manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 7 hariva. Alatsinainy sy talata, mihidy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ireo fivarotana 5 malaza indrindra any New York
Polyphemus sy Odysseus
Fomban-drazana sy fomban-drazana ao Hong Kong